महरा र रोशनीको फरेन्सिक जाँच: आयो यस्तो रिपोर्ट, अब के होला ? « हाम्रो ईकोनोमी
महरा र रोशनीको फरेन्सिक जाँच: आयो यस्तो रिपोर्ट, अब के होला ?
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट ब’लात्कार प्रयासकी पीडित रो’शनी शाहीको शरीरमा लागेका चोटपटकमा बाहिरी मानिसको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा गरिएको फरेन्सिक जाँचबाट रो’शनीको अनुहारलगायत शरीरका विभिन्न भागमा लागेको चोटपटकमा बाहिरी मानिसको संलग्नता देखिएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । प्रहरीले रोशनीलाई असोज १७ गते त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो । स्रोतका अनुसार नियमित स्वास्थ्य अवस्था र अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गरिएको रोशनीको ‘फरेन्सिक जाँच प्रतिवेदन’ अस्पतालले प्रहरीलाई दिइसकेको छ ।
रोश’नीमाथि बला’त्कार प्रयास आरोपमा निवर्तमान सभामुख महरा असोज १९ गते बालुवाटारस्थित सभामुखको सरकारी निवासबाटै पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकै दिन राति उनको पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । उनको फरेन्सिक जाँचसमेत गरिएको थियो । उनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आइनसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
असोज १८ गते रोश’नीले महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरमा महराले आफूमाथि ब’लात्कार प्रयास गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसको भोलिपल्टै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरेको थियो । महरा अहिले प्रहरी निगरानीमै थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार क्रममा छन् । मुटु र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनी चिकित्सकको रायअनुसार अस्पताल भर्ना भएका हुन् । मंगलबार अदालत खुलेपछि महरालाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न लैजाने प्रहरीको तयारी छ ।
‘ब’लात्कार प्रयासकी पीडित रो’शनी शाहीको शरीरमा चोटपटक लागेको पुष्टि भयो, त्यसमा बाहिरी पक्षकै संलग्नता देखियो,’ फरेन्सिक जाँच प्रतिवेदनबारे उल्लेख गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अर्को पक्षको समेत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि अनुसन्धान दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छ ।’
गत असोज १२ गते राति रोश’नीको कोठामा गएर महराले यौ’न दु’र्व्यवहार गरेको भन्दै पीडितको भनाइसहितको भिडियो समाचार असोज १४ गते हाम्रा कुरा डटकमले सार्वजनिक गरेको थियो । सोही साँझ सभामुख महराको सचिवालयले समाचारको खण्डन गर्दै घटनामा महराको संलग्नता नभएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो तर भोलिपल्ट दिउँसो महराले पदबाट राजीनामा दिए ।
राजीनामा दिएकै दिन रो’शनीले महराबाट आफूमाथि कुनै यौ’न दु’र्व्य’वहार नभएको ‘भिडियो अन्तर्वार्ता’ नागरिक खबर डटकम अनलाइनलाई दिएकी थिइन् । त्यसको २ दिनपछि असोज १७ गते दु’र्व्यव’हारसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुका साथै १८ गते महराबाटै ब’लात्कार प्रयास भएको किटानी जाहेरी बानेश्वर प्रहरीमा दिएकी थिइन् । त्यसपछि उक्त प्रकरणले अर्कै मोड लिएको हो । यौ’न दु’र्व्यवहार र ब’लात्कार प्रयास प्रकरणको अनुसन्धान सुरुमा बानेश्वर प्रहरीले गरे पनि अहिले यो मुद्दा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले हेरिरहेको छ ।